ရထားသောအခွင့်ကိုအကောင်းဆုံးဥရောပ Beach | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားသောအခွင့်ကိုအကောင်းဆုံးဥရောပ Beach
အတော်များများကကမ်းခြေအားလပ်ရက်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စတင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်, ဘတ်စ်ကား, နှင့်ကူးတို့, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူစွာလမ်းရှိပါတယ်. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြ ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် အကျိုးခံစားခွင့်, သငျသညျထွက်ခွာ စိတ်အေးလက်အေးခံစား သင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်မစမှီမီ. သင်တစ်ဦးရှာနေရှိမရှိ အရသာမုန့်ညက် သမုဒ္ဒရာ၏တစ်ဦးအမြင်တစ်ခုသို့မဟုတ် Chilling မိသားစုအားလပ်ရက်နှင့်အတူ, ရထားများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သောလှပသောဥရောပကမ်းခြေများစွာရှိသည်.
အီတလီ: တိတ်ဆိတ်ဂလားပင်လယ်အော်, Sestri Levant
အနီးဆုံးရထားဘူတာ: Sestri Levant ဘူတာ, 1.1ကီလိုမီတာ, တစ်ဦး 14 ပျောက်မိလမ်းလျှောက်.
အဆိုပါ အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော အီတလီကမ်းရိုးတန်းမြို့ Sestri Levante သည်ရထားများဖြင့်သွားလာနိုင်သောကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများ နှင့်ရောင်စုံပင်လယ်ကမ်းခြေအိမ်များနှင့် အပန်းဖြေ, အားလုံး သမိုင်း၌ငွေရတတ်သော နှင့်ယဉ်ကျေးမှု. ထိုအ beachgoers – သငျသညျကံရောက်နေ. Baia del Silenzio အမည်ရှိအဆိုပါသေးငယ်တဲ့ကမ်းခြေ, သို့မဟုတ် 'ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဂလားပင်လယ်အော်က' အေးဆေးနေစပြီးရရှိသွားတဲ့, ပင်လယ်အော်၏ကြည်လင်ပြာရောင်ရေကို, အဖြစ်လေတိုက်ရာမှကမ်းခြေကိုကာကွယ်ရန်ကြောင့်သဘာဝကျောက်ဖွဲ့စည်းမှု.
လူအစုအဝေးကိုရှောင်ကြဉ်ရန်, ကျနော်တို့စက်တင်ဘာလသို့မဟုတ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာပရဒိသု၏ဤထောင့်သွားရောက်လည်ပတ်အကြံပြုချင်ပါတယ်. ဇူလိုင်နှင့်သြဂုတ်လအားလပ်ရက်-ချမှတ်သူများအိမ်မှာသူတို့ရဲ့လမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်ဤသူကားအ.
မီလန် Sestri Levant မှရထား
la Spezia Sestri Levant ရထားမှ
ဂျီနိုအာ Sestri Levant မှရထား
Parma Sestri Levant မှရထား
စပိန်နိုင်ငံတွင်ရထား Access Beach: Playa de la Llosa, Cambrils
အနီးဆုံးရထားဘူတာ: Cambrils မီးရထားဘူတာရုံ, ရုံ 1,2km သို့မဟုတ် 16 ရထားဘူတာမှမိနစ်လမ်းလျှောက်.
Ibiza နှင့် Majorca ၏ပိုပြီးကျော်ကြားစပိန်ကမ်းခြေမတူဘဲ, Platja de la Llosa Cambrils ၏သေးငယ်တဲ့ကမ်းခြေမြို့ကမ်းရိုးတန်းပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်ကမ်းခြေဖြစ်ပါသည်. အပန်းဖြေအားလပ်ရက်ရှာနေမိသားစုများသို့မဟုတ်စုံတွဲများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော. Playa de la Llosa စားသောက်ဆိုင်အများအပြားရှိပြီး အနီးအနားမှာကဖေး, အဖြစ်အမြတ်ရခြင်းအများအတွက်ထီးနှင့် loungers, အများပြည်သူရေချိုးခန်း, နှင့် ဘီးတပ်ကုလားထိုင် access ကို.
ကမ်းခြေသူ့ဟာသူလှိုင်းတံပိုးနှင့်ဒီရေကန့်သတ်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့လူလုပ် coves ရှိပါတယ်. ကြည်လင်သောအပြာနွေးရေနှင့်ပေါင်းလိုက်သော, ဒီရေကူးခြင်းနှင့် snorkeling အလွန်စိတ်ပြေလျော့သွားစေသည်.
ပေါ်တူဂီ: Meia Praia, Algarve
အနီးဆုံးရထားဘူတာ: Meia Praia မီးရထားဘူတာရုံ, တစ်ဦး6မိနစ်, 500မီတာလမ်းလျှောက်.
နာမည်ကျော်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး Algarve ကမ်းခြေ, အဆိုပါ Meia Praia ရထားအားဖြင့်သုံးစွဲနိုင်သည့်လာဂို့ဒေသနှင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးကမ်းခြေများတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်. အခြားအဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်, Algarve ပိုပြီးတိုးရစ်-ဖြည့်အစိတ်အပိုင်းများ, Meia Praia လေးကီလိုမီတာရှည်တဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရွှေသဲ၏အိုအေစစ်နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်. ကဖေးလည်းရှိပါတယ်နှင့် ဘား ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် dotted. ကမ်းခြေ၏အနောက်အစွန်းကြောင့်ဂို့ရန်၎င်း၏နီးကပ်မှအနည်းငယ် busier ဖြစ်ပါသည်.
Meia Praia စ လူကြိုက်အလယ်ရေအတွက် အားကစားအပါအဝင် windsurfing, စွန်လွှတ်ခြင်း, နှင့်ဂျက်နှင်းလျှောစီး. ဧည့်သည်များသင်ခန်းစာများများအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်. နည်းစွန့်စားဘို့, အဆိုပါဆတ်ရေအေးထဲမှာသို့ကျဆင်းလာခြင်းနှင့်မုသား-Down တစ် lounger တခုတခုအပေါ်မှာထီးအောက်မှာ, ငှားလည်းမရရှိနိုင်.
ရထားအားဖြင့်လက်လှမ်းကမ်းခြေများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးရွေး, ပြင်သစ်: သဲသောင်ပြင် Senix, Guethary
အနီးဆုံးရထားဘူတာ: ကွာ Gare de Guethary ရုံ 2.1km, အလွယ်တကူ walkable ပေမယ်သင်သည်သမုဒ္ဒရာတစ်ဦးအမြန်တက္ကစီစီးနင်းယူနိုင်ခဲ့.
တစ်ဦးကသေးသေးလေး, ရိုင်းအပေါ် secluded ကမ်းခြေ, ပြင်သစ်၏ unspoiled တောင်ပိုင်းအဘိဓါန် Western ကမ်းရိုးတန်း, သဲသောင်ပြင် Senix (ထို့အပြင်တခါတရံ Cenitz ကိုခေါ်) အစပြုသူ surfers အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီးဖြစ်ပါသည်, မိသားစုများသို့မဟုတ် တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက်. ပြင်သစ် Basque အဘိဓါန်နိုင်ငံ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ, Biarritz နှင့် Saint-Jean-de-လုဇမြို့တည်းဟူသောအကြား, Guethary တစ်ဦးချစ်စရာကောင်းအဟောင်းဖြစ်ပါသည် ငါးဖမ်းမြို့.
တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ် Guethary ၏အဆုံးနှင့်ရထားအားဖြင့်လက်လှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းခြေ၏အစိတ်အပိုင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ရဲ့, Plage က de Senix မှာလှိုင်းတံပိုးကိုသင်၌ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်ရှာတွေ့ချင်ပါတယ်ထက်အနည်းငယ်သေးငယ်များမှာ Biarritz, အရာဥရောပရဲ့ surfing မြို့တော်အဖြစ်လူသိများသည်. သဘာဝအလှအပနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်း Vibe ကလုပ် သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ဌာန.
လိုင်ယွန်မှ Biarritz ရထားလက်မှတ်တွေ
သင်တို့သည်နောက်ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေနှင့်အတူရထားသဖြင့်လက်လှမ်းကမ်းခြေရန်သင့်ခရီးစဉ်အတွက်မီးရထားလက်မှတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာကြသည်? အလည်အပတ် Saveatrain သို့ အများဆုံးတတ်နိုင်နှုန်းထားများ access.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-beaches-accessible-by-trains%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများ / fr ဖို့ / nl ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်.
longtrainjourneys ရထားခရီးသွား ခရီးသွား travelfrance travelportugal travelspain